Khibradaha Aqoonsiga CCNA - Su'aalaha iyo Jawaabaha Wareysiga - ITS
Khibradaha Aqoonsiga CCNA - Su'aalo iyo Jawaabo Waraysiga
Su'aalaha Waraysiga iyo Jawaabaha ee CCNA
CCNA ama "Cisco Certified Network Associate" shahaadada ayaa ah mid ka mid ah kuwa ugu badan ee la raadinayo shahaadooyinka CISCO ka dib adduunka oo idil. Waxaa jira in ka badan hal milyan oo xirfadle CISCO halkaas oo u adeega tiro badan oo ka mid ah ururrada la qiyaasay oo yar iyo midka ballaaran oo ay ku jiraan MNCs. CISCO waa hay'adda ugu weyn ee IT-da ee shabakadda aduunka iyo ka dibna shahaadada CCNA waxay leedahay muhiima aad u weyn waxayna bixisaa mushahar sare iyo faa'iidooyin kala duwan. Haddii ay dhacdo in aad tahay xirfadlaha haysta shahaadada CCNA, su'aalaha hoosta ku jira ayaa laga yaabaa inay yimaadaan markaad la kulanto wareysigaaga xirfadeed. Aqoonso iyaga oo maskaxda ku haya ujeedada ugu dambeysa si aad ugu diyaargarowdo si aad u hesho suurtogalnimada soo socota iyo soo noqoshada shaqaalaha soo noqnoqonaya iyo si aad u hubiso si waxtar leh.
Waa maxay habaynta?
Gawaarida ayaa ah habka loo qaadanayo "Packet" si aan ujeedo u gaar ah. Bedelida waa qalabka wax-u-qabsiga, taas oo ku xiran cinwaanka IP-ga. Isbedelku wuxuu sameeyaa nidaamkan marka la boodo iyadoo la boodayo.
Waa maxay qaybta macluumaadka ee isku xirka shabakada?
Daqligani wuxuu hubiyaa xogta waxaa loo qaabeeyey habka saxda ah, waxay ku xiran tahay meel qalad ah waxayna hubisaa in xogta loo gudbiyo si ku-tiirsan. Tani waa lakab halka "Ethernet" ay ku nooshahay. Cinwaanka Macintosh iyo mabaadi'da Ethernet waxay ku jiraan lakabka xogta.
Maxay yihiin isbedelka loo isticmaalo qayb ka mid ah shabakadaha?
Isbedelada waxaa loogu talagalay in ay si sax ah udhigaan shabakada. Fureyaasha ayaa dabiici ah 2 gadget, sidaas darteed aad u eegto aragtida cinwaanka macintosh, taas oo markaa kordhinaysa xawaaraha.
Maxaa loola jeedaa ciriiriga shabakada?
Marka la eego macaamiisha kala duwan (oo ka sarreeya barta jebinta iyo tayada kanaalka shabakada) waxay isticmaalaan ama isku dayaan inay isticmaalaan awood isku gudbinta isku midka ah, xannibaadu waxay dhacdaa, maadaama ay shabakadu dayacday inay waajib ku tahay noocaan kala duwan ee macaamiisha. Maadaama mareegta hoose ee hoose aysan haysan meel ku filan oo lagu hayo xogta, kadibna xogta ayaa hoos loo dhigaa.
Waa maxay doorka buundada? Ma kala qaybin kartaa shabakada jajabyada ama qaybaha yaryar?
Wareegyada xargaha ee shabakada, iyada oo aan la hagaajineynin cabbirka. Waxay u gudbeysaa warqadaha xogta u dhexeeya shay kasta ee 2 ee ka shaqeeya isku mid ah iyo mid ka mid ah heshiiska qoraalka noocan oo kale ah.
CISCO Catalyst wuxuu u shaqeeyaa iyada oo loo marayo qawaaniinta is-beddelka LAN?
CISCO Catalyst 5000 waxay adeegsanaysaa "guntin" iyada oo la beddelayo shirarka iyo farsamada. Isku-beddelka adoo bedelaya wuxuu bilaabi doonaa marinka marka cinwaanka goolka la aqoonsan yahay. Kala soocida dhexdeeda iyo Makhaayada-iyo-Forward waa Mashruuc-Store-iyo-Fadlan wuxuu helayaa dhammaan qashin ka hor intaadan dirin. Kiiska dukaanka iyo weerarka waa Catalyst 2960 iyo 2960-S
Impetus 3750-X iyo 3560-X.
Tan iyo markii la xakameynayo faahfaahinta aan la ogaan karin adoo u adeegsanaya cinwaanka bartilmaameedka, Dhar-jarista ayaa saameyn ku yeelan karta fulinta shabakad adigoo u diraya qaawanaanta nijaasta ah ama qaawan. Hareerahaan aadka u xun ayaa ka dhigi kara duufaanka isgaarsiinta halkaas oo dhowr qalab oo shabakadda ka mid ah ay falcelinayso jaantusyada hoos u dhaca.
Shaqo noocee ah ayaa waxaa qabanaya LLC-da?
LLC ama lakabka Control Logical waa qiimo badan oo ku saabsan bixinta waxyaabo dheeraad ah oo loogu talagalay naqshadeeye kasta. Tusaale ahaan, waxay ku siin kartaa maamulka xakamaynta socodka iyadoo la isticmaalayo iyo isticmaalka codsiyada bilawga / istaagida. Lakabka waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa daaweynta khaladaadka.
Doorka doorka lihi ayaa ku dhex jira shabakad?
Qodobbada 3 ee qodobbada codsiga waa:
Tani waa lakab kaas oo siinaya isku-dhex-dhexaadka macmiilka iyo codsiga.
Tani waa lakabka bixiya codsiyada kala duwan, tusaale ahaan, maamulka macaamiisha, maamulka websaydhka, maamulka dokumentiyada iyo wixii la mid ah.
Si loo kobciyo loona hagaajiyo codsiyada labadaba macmiilka iyo serverka.
Waa maxay farqiga u dhexeeya IGRP iyo RIP?
Inkasta oo IGRP ay qiimeyneyso waxyaabaha sida tayada aan laheyn, awoodda wareejinta xogta, dhajinta xogta iyo MTU si ay u sababto oo u bixiso shabakada ugu fiican, RIP waxay ku xiran tahay lambarrada soo noqnoqda si ay u ogaadaan koorasyada ugu haboon shabakada.
Maxaa loola jeedaa Boot P?
Xarumaha shaqada ee aan haysan taarikada oo lala xiriiriyo shabakad kasta oo la bixiyay ayaa lagu dhajiyaa iyadoo la adeegsanayo heshiiska Boot P. Ereygan yar ayaa weli ah "Barnaamijka Bootka". Wax kale oo aan ahayn, Boot P waxaa intaa sii dheer isticmaali karaa goobaha shaqada si ay u ogaadaan cinwaanka iyaga u gaar ah, iyo cinwaanka IP-ga ee server-ka.
Kuwani waa dhowr su'aalood oo laga yaabo in lagu weydiiyo waraysiga. Noqo sida tan, su'aasha waxay noqon kartaa mawduuc kasta oo aad ka baaraandegtay iyada oo loo eegayo shahaadada CCNA. Waa in aad la kulantaa dhammaan qodobbada oo aad xoogga saartaa si hoose si aad uga hortagto waraysiga si hubaal ah. Tani waxay sidoo kale damaanad qaadi doontaa barwaaqadaada.
Arag sidoo kale:
Shahaadada CCNA - Hage Dhammaan
Su'aalaha Wareysiga Xirfadlaha Sayniska ee PMP
Waxyaabaha Muhiimka ah ee Lagu Ogyahay Waxyaabaha Laga Helo Ka Qeybgalka Iskaashiga CCNP
Xirmooyinka 10 Cloud Xogta ee 2018